ရောင်းရန်အတွက်သတ္တုခုံစက်၊ CNC၊ လက်စွဲ၊ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ်1 / ရောင်းရန်သံမဏိစက်
သင်က bar သို့မဟုတ် disk type အမျိုးအစား metalpiece ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်၊ ပိုမိုတောက်ပသောအပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုရရှိရန်၊ round bar မှအပြင်သို့ချည်ရန်၊ အတွင်းအပေါက်ကို process လုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သတ္တုခုံသည်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတ္တုတူးစက်များ၊ သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ ရေနံ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ခြင်းနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
ဒါကြောင့်ခုံစက်၏ရွေးချယ်မှုမှကြွလာသောအခါ, ဒါဟာအဓိကအား workpiece ၏အရှည်, အရွယ်အစား, အလေးချိန်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ mode ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အလျားလိုက်အငွေ့၊ ဒေါင်လိုက်ခုံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါက CNC စက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ သို့သော်အပိုပစ္စည်းအရေအတွက်သည်အလွန်နည်းသည်ဆိုပါက CNC ခုံသည်အလဟ of ဖြစ်သွားပါကလက်ကိုင်ခုံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခုံအရည်အသွေးသည် ၀ ယ်ယူမှုထိန်းချုပ်ခြင်း၏အရည်အသွေး၊ ပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များမှတည်ငြိမ်သည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုကြိုဆိုပါသည်။
မေးခွန်းများ?+ 86-15318444939 သို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်နှင့်စကားပြောပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကိုလည်းသင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။
servo motor လည်ပတ်မှုသည် CNC စနစ်ဖြင့်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊
အဆိုပါ workpiece အလျားလိုက်လှည့်နှင့်ရှုးတက်နှင့်ဆင်းလှုံ့ဆော်ပေး။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အလေးချိန်နှင့်အချင်းနှင့်အတူ workpiece များအတွက်သင့်လျော်သည်
အပေါက်မှတဆင့်ခုံဗိုင်းလိပ်တံအတော်လေးကြီးမားသည်, အပြောင်းအလဲနဲ့အရှည် 10 မီတာကျော်နိုင်ပါတယ်, အများအပြားတန်ချိန်အထိ workpiece ၏အလေးချိန်ကိုဆီးတားနိုင်သည်။
ပိုက် Threading ခုံစက်
အသုံပြုခြင်းမပြုလုပ်ရန်သင့်လျော်သောအစာကျွေးခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းကို manual ထိန်းချုပ်သည်
ဖြုတ်တပ်နိုင်သောကုန်းနှီးကိုခုံအိပ်ရာနေရာတွင်တပ်ဆင်ပါ၊ ခုံ disk အမျိုးအစား၏အလှည့်အချင်းကိုတိုးပါ
သေးငယ်တဲ့ workpiece အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အသင့်လျော်စျေးပေါစျေးနှုန်း, ထိုပစ္စည်း၏အလေးချိန်ရာပေါင်းများစွာကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အရ, CNC နှင့်သာမန်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်
bedstead ၏ Angle အရ, bedstead ရှိုသောအိပ်ခန်းကိုခွဲခြားနိုင်သည်
Metal lathe machine သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိသတ္တုအဖြတ်သုံးစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စက်၏အရှည်သည်မလုံလောက်ပါကအပိုပစ္စည်းသည်токရန်ရှိစက်၏အကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်ဗိုင်းလိပ်တံအပေါက်ကို ဖြတ်၍ သွားနိုင်သည်။ ဤသည်အပေါက်မှတဆင့်ဗိုင်းလိပ်တံ၏အချင်းလိုအပ်သောပစ္စည်း၏အချင်းထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သည်။
ခုံသည်လေးလံသောသတ္တုထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာဖြစ်ပြီးကိုယ်ထည်ကိုသံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ များသောအားဖြင့်အလေးချိန် ၁ တန်ကျော်သောအလေးချိန်သည်ကြီးမားသောအခ့်ဖြစ်လျှင်အလေးချိန်သည် ၁၀ တန်ကျော်နိုင်သည်။ အနီးအနားရှိတစ်စုံတစ် ဦး သည်မတော်တဆကျဆင်း။ ထိမိလျှင်၎င်းသည်ခုံသည်စာရေးကိရိယာဖြစ်လျှင်စိတ်ထိခိုက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ခုံစတင်လည်ပတ်သောအခါမြန်နှုန်းမြင့်လှည့်ဗိုင်းလိပ်သည်လုပ်ငန်းကိုလှည့်ရန်မောင်းနှင်သည်။ အကယ်၍ မတော်တဆမှုဖြစ်လျှင်၊ ခြေသည်းသည်ပျံထွက်သွားလျှင်ကားမတော်တဆထိခိုက်မှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဆံပင်အရှည်၊ အင်္ကျီလက်တွေ၊ စနစ်တကျမစီစဉ်နိုင်ရင်စက်ယန္တရားမှာပါဝင်ဖို့လည်းလွယ်ကူပါတယ်။
ခုံကသုံးသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုယေဘုယျအားဖြင့်စက်မှုဆိုင်ရာလျှပ်စစ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အကယ်၍ လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပါကလျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်သည်။
၁။ ၀ န်ထမ်းအသစ်တစ် ဦး သည်လမ်းညွှန်ဘေးတွင်ရှိသည့် ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်၊ ခုံလည်ပတ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။
2 ၀ တ်ဆင်ခြင်းကိုဂရုပြုပါ၊ cuff ကိုတင်းတင်းဆပ်ရမည်၊ အဝတ်အစားကိုချည်မျှင်နှင့်အ ၀ တ်ခါးပတ်ကြိုးတပ်ထားရန်ခွင့်မပြုပါ။ လက်အိတ်မရှိ၊ လက်စွပ်မရှိ။ နာရီလည်းမရှိ။ မျက်စိကာကွယ်သူများမကြာခဏဝတ်ပါ။
၃။ အပြောင်အပြာသည် workpiece ကိုချသောအခါသို့မဟုတ် workpiece ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေးသောအခါအလုပ်မလုပ်တော့ပါ
၄ ခုံလည်ပတ်နေစဉ်တွင် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ခုံမှအကွာအဝေးအချို့ထားသင့်သည်
၇ ခုံမလုပ်ခင်၊ အပေါက်ကိုသော့ခတ်ထားပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ၊
၈ မိုးသည်းထန်စွာသောအခ့ loading လေးတစ်ခုကိုမတင်ခင်နှင့်မချထားမှီသုတ်ထားသည့်မတော်တဆကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်သစ်သားတုံးနှင့်လမ်းရထားကြားတွင်ထားရမည်။
cnc lathe machine နှင့် manual lathe machine တို့၏ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
CNC ခုံ၏ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်: CNC စနစ် - ထိန်းချုပ်စက် - servo မော်တာ
အော်ပရေတာသည် GC ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ ပရိုဂရမ်ကိုဖြတ်တောက်ရန်လိုလိမ့်မည်၊ အခုံ၏ CNC စနစ်သို့တင်သွင်းသည်။ အပြည့်အ ၀ မတိုင်မီအလုပ်ခွင်၏အလိုအလျှောက်ပြုပြင်မှုကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်လိမ့်မည်။
သာမာန်ခုံ၏ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်: လက်စွဲဖြင့်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ပရိုဂရမ်မလုပ်နိုင်ပါ၊ ပို၍ ပရိုဂရမ်မလုပ်နိုင်ပါ။
လက်အိတ်များဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်အလုပ်လုပ်သည့်အဝတ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊ cuffs buckle၊ ရှည်လျားသောဆံပင်အားအကာအကွယ် ပေး၍ လက်အိတ်များမဝတ်ဆင်ခြင်း၊
ခုံအပြည့်လုံးလုံးမပါ ၀ င်ပါ၊
3 ကိုယ်တိုင် Chuck ကိုလွှတ်သို့မဟုတ်သော့ခတ်
(2) ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် tool ကိုဟာ workpiece ကိုပုံနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်လို့မရပါဘူး;
1. လှည့် tool ကိုအမျိုးအစား
ယေဘုယျအားဖြင့် CNC ခုံတွင် standard clamp indexable tool ကိုအသုံးပြုသည်။ indexable tool ၏ဓါးနှင့်ကိုယ်ထည်တွင်စံနှုန်းများရှိသည်။ ဓါးသွားပစ္စည်းများသည်ကာဗိုက်၊ အမိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘိလပ်မြေနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိများဖြစ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအရ၎င်းကိုဆလင်ဒါဖြတ်စက်၊ ပြင်ပချည်ဖြတ်စက်၊ အတွင်းချည်ရှုး၊ ဖြတ်စက်၊ အပေါက်ဖြတ်စက် (အလယ်အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ ပျင်းစရာအဖြတ်၊ စသည်ဖြင့်) ခွဲခြားနိုင်သည်။
indexable tool ကို regrinding Blade ကိုပြုပြင်ရန်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် screw ၏ block ဖွဲ့စည်းပုံ၊ screw press plate၊ screw pin သို့မဟုတ်клинကိုအသုံးပြုသည်။
မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိသည်များသောအားဖြင့်အလွတ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး၎င်း၏ခိုင်မာမှုသည်ခိုင်ခံ့သောကာဘိုက်ထက်သာလွန်သည်။ မာကျောမှု၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်မှုနှင့်အနီရောင်မာကျောမှုသည်ဘိလပ်မြေကာဘိုက်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောမာကျောမှုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ရန်မသင့်တော်ပါ။ မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်သူမှမသုံးမီချွန်ရန်လိုအပ်ပြီးအထူးလိုအပ်ချက်များရှိသည့်စံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများအတွက်သင့်တော်သည်။
ဘိလပ်မြေကာဗိုက်ထည့်ခြင်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး NC လှည့်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ဘိလပ်မြေကာဗိုက်ထည့်သွင်းမှုများတွင်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာစီးရီးများရှိပြီးတိကျသောနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကိုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုကိရိယာထုတ်လုပ်သူမှပေးသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း (ISO) အရဘိလပ်မြေကာဗိုက်ထည့်မှုများကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားသည်။ p-steel, m-stainless steel နှင့် k-cast သံသည်ခိုင်ခံ့မှုနှင့်ဘိလပ်မြေကာဗိုက်၏ကွေးနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ၁၊ ၅၊ ၁၀၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀ နှင့် ၅၀ တို့၏နံပါတ်များကို K, P နှင့် subdivision အတွက် m တို့၏နံပါတ်များအပြီးတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရေအတွက်နည်းလေလေမာမာပိုမိုမြင့်မားလေ၊ သို့သော်မာကျောလေလေဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အရေအတွက်များလေလေခိုင်မာလေလေမာကြောင်လေလေဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခိုင်ခံ့မှုရှိခြင်းနှင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုရှိသည့်ကိရိယာပစ္စည်းများသည်ခိုင်ခံ့သောကာဗိုက်ထက်ကြွေထည်မြေထည်၊ ကုဗဘိုနိုက်ထရိတ်နှင့်စိန်တို့ဖြစ်သည်။
၁) ရေနံတင့်ကားအားလုံးရှိဆီလီဗာကိုအမြဲတမ်းရေနံစံအတိုင်းထားသင့်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ထိရောက်သောချောဆီအရည်ကြည်သို့မဟုတ်ပါဝါဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူအပူဖြစ်စေပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။
၃။ Headstock နှင့် feed box တို့အားသင့်တော်သောချောဆီကိုသေချာစေရန်မျက်မှန်ဖန်မှတစ်ဆင့်ဆီစီးဆင်းမှုကိုမကြာခဏစစ်ဆေးပါ။
၄။ ပုံမှန်လည်ပတ်ချိန်တွင်မော်တာခါးပတ်၏တင်းမာမှုကိုစစ်ဆေး။ ချိန်ညှိပါ။
၅။ နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုမပြုမီ၊ ပင်မမော်တာကိုတစ်မိနစ်ခန့်မောင်းနှင်ပါ။ ထို့နောက်အမှုန့်အားလုံးကိုဝန်မပါဘဲလည်ပတ်ပါ၊ ရေနံဆီသို့ရေဖြည့်ပါ။
၇။ leadscrew ကိုချည်အတွက်သာအသုံးပြုသည်။ စစ်ဆင်ရေးလှည့်အဘို့အအသုံးပြုရန်ဘယ်တော့မှမ။
၁) ။ ဗိုင်းလိပ်တံညှိနှိုင်းမှု
Spindle bearing ၏အလွန်အကျွံရှင်းလင်းမှုသည်“ အလုပ်မလုပ်ဘဲချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်” ကိုဖြစ်စေသည်။ ဗိုင်းလိပ်တံ၏လည်ပတ်မှုတိကျမှုတွင် radial run နှင့် outial axial run သည်။ ၀ င်ရိုးထွက်ပေါက်ထွက်နှုန်းကိုဗိုင်းလိပ်တံ၏အရှေ့ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောနှစ်တန်းတုံးပါ ၀ င်သောကြောင့်နှင့် ၀ င်ရိုး၏နောက်ကျောတစ်ချောင်းတွင် radial တွန်းကန်အားဘောလုံးပါ ၀ င်သည်။ Check method ကိုစာမေးပွဲလက်မှတ်၏ပုဒ်မ ၅ နှင့် ၈ အရသိရသည်။ အများအားဖြင့်တိကျမှုသည်တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ပါ။ Method ကိုအောက်ပါဖြစ်ပါသည်: ညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်တ ဦး တည်းအခွံမာသီး bearing.nd ဗိုင်းလိပ်တံအတွက်ရှင်းလင်းရေးဖယ်ရှားခြင်းအဘို့အဗိုင်းလိပ်တံအပေါ်အခွံမာသီးကိုချိန်ညှိ။ အကယ်၍ radial စီးဆင်းမှုသည်တောင်းဆိုသည့်အရာနှင့်မကိုက်ညီပါက၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောနည်းလမ်းအချို့အားဖြင့်နောက်ဘက်စွန်းကိုချိန်ညှိပါ။ ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်တစ်နာရီလျှင်မြန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်ဗိုင်းလိပ်တံကိုလည်ပတ်ပြီးအပူချိန် ၇၀ exceed ထက်မပိုသင့်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အကယ်၍ ၎င်းထက်ကျော်လွန်ပါကပထမ ဦး ဆုံး set nuts ပေါ်သော့ခတ် screw နှစ်ခုကိုဖြေလျှော့ပါ။ ထို့နောက်အခွံမာသီးကိုအနည်းငယ်လျှော့ပေးသင့်သည်၊ ညှိနှိုင်းမှုအပြီးတွင်သော့ခတ် screws များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။
2） ။ ကွင်းဆက်ဘီးညှိနှိုင်းမှု
ဗိုင်းလိပ်တံ၏အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကို headstock ၏ရှေ့မှောက်ရှိလီဗာများကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဂီယာအခြေအနေများရရှိရန်ကွင်းဆက်ဘီးယန္တရားမှတဆင့်ထိန်းချုပ်သည့်လီဗာများသည်ဆလိုက်ဂီယာကိုရွေ့လျားနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်းသည်၎င်း၏ဆွေမျိုးအမြန်နှုန်းနှင့်မညီပါကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုညွှန်ပြသည့်ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်းပေါ်တွင်ထွင်းထားခြင်းသည်ကွင်းဆက်ဘီးယန္တရား၏ညှိနှိုင်းမှုကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအဝက်အူကိုလျှော့ချပါ၊ ၀ င်ဆတ်ရိုးကိုလှည့်ပါ၊ ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုညွှန်ပြသည့်နေရာကိုကွင်းဆက်အောင်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်သံမဏိဘောလုံးများမှတဆင့်ရိုးတံကိုနေရာချထားရန်ဝက်အူကိုတင်းပါ။
Cross slide slide နှင့် guideways အကြား clearance slide နှင့် slideway ကြားရှိ clearance ကို gibs မှ screw တစ်ခုမှတဆင့်ချိန်ညှိသည်။ ညှိနှိုင်းနိုင်သည့်အခွံမာများ ၀ တ်ဆင်မှုကြောင့်ရရှိလာသော cross slide slide screw ၏ backlash သည်အခွံမာများပေါ်ရှိ screw ကိုလျှော့ချပြီး backlash ကိုဖယ်ရှားသည်အထိ screw နှင့် wedge ကိုဆွဲပါ။ ထိုအခါဝက်အူတင်းကျပ်။
အဓိကမောင်းနှင်သည့်မော်တာကိုခုံတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ အဖုံးကိုခုံ၏ရှေ့ပိုင်းတွင်ဖယ်ရှားပါ။ ခါးပတ်အားတင်းခြင်းကိုအခွံမာသီးများမှတစ်ဆင့်မော်တာအခြေစိုက်စခန်း၏အလှပြောင်းလဲခြင်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ မော်တာ၏ခါးပတ်သည်တင်းမာမှုသည်မော်တာစက်၏ဗဟိုနှင့် headstock ၏စက်သီး၏အကွာအဝေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။
မဟုတ်ဘူး ရပ်တန့် အကြောင်းရင်းများ သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများ
ခရီးသွားခလုတ်ကိုတို့ထိလို့မရပါ switch ပေါ်ရှိ screw ကိုလှည့်ရန်တံခါးကိုဖွင့်ပါ။ အပြင်ဘက်ရှိ switch ကိုသင့်လျော်စွာရွှေ့ပါ
2 ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာကို run လို့မရပါဘူး ခရီးသွားခလုတ်ကိုမသုံးပါ switch ပေါ်ရှိ screw ကိုလှည့်ရန်တံခါးကိုဖွင့်ပါ။ အပြင်ဘက်ရှိ switch ကိုသင့်လျော်စွာရွှေ့ပါ
3 Transformer ကိုမီးရှို့သည် အသုံးပြုသူ၌ပါဝါဗို့အားသတ်မှတ်ထားသောဗို့အားနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ၁။ တာ ၀ န်နှင့်အညီ၊ မီးသီးကို“ 24v, 40w” တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးပါ
၂။ Transformer ကိုကိုယ်တိုင်အစားထိုးပါ။
4 headstock အပေါ်လက်ကိုင်မရနိုင်ပါ
၁။ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလက်ကိုင်ဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပြီး၊
2. ပျဉ်ပေါ်နှစ်ခုလုံး screw နှစ်ခုတင်းကျပ်။
5 ဗိုင်းလိပ်တံသည်နိမ့်သောအရှိန်ဖြင့်လည်ပတ်သောအခါ၎င်းသည်မြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ ဗိုင်းလိပ်တံ slider တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် eccentric shaft ပေါ်ရှိအခွံမာသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်လာသည်။ Headstock ၏အပေါ်ဆုံးဖုံးကိုဖွင့ ်၍ ၀ င်ဆတ်ရိုးကိုတစ်မျိုးတည်းလှည့်ပါ။ လက်ကိုင်ကိုအမြန်နှုန်း၊ အမြန်နှုန်း (သို့) နေရာလွတ်သို့ပို့လိုက်ပါ။
6 headstock အတွက်ဗိုင်းလိပ်တံဖြည်းဖြည်းစတင်သည် headstock မှာ I ကိုအပေါ်ပွတ်တိုက်မှု discs တွေကို၏ကွာဟမှုကြီးမားသည်။ ပွတ်တိုက်မှု discs တွေကိုချိန်ညှိပြီးနောက်ဗိုင်းလိပ်တံဘုံအခြေအနေမရောက်မချင်းစစ်ဆေးရန်ဗိုင်းလိပ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လီဗာများကိုဖယ်ရှားပါ။
7 ထိုသို့သောအမှုန့်များဖြစ်သည့်အခါသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်၏ကြမ်းတမ်းရမ်းကားမှုဖြစ်သည့်အခါခုံသည်တုန်ခါသည်။ 1. ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်ရထားစည်းဝေးပွဲ၏ညှိနှိုင်းမှုမှန်ကန်သောမရှိကြပေ။
၂။ Rake or clearance ထောင့်ကအရမ်းကြီးတယ်။
3. tool ၏ပစ္စည်းမှန်ကန်သောမဟုတ်ပါဘူး။
4. Shanks ၏အင်အားသည်မလုံလောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် cantilever ကရှည်လွန်းတယ်
2. လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ tool ကိုကြိတ်။
၃။ ပစ္စည်း၏ပစ္စည်းအရသင့်လျော်သောကိရိယာကိုရွေးချယ်ပါ။ 。
4. shand ၏ cantilever အရှည်ညှိ။
8 စက်ပြင်ပဆလင်ဒါမျက်နှာပြင်ကိုလှည့်ရန်အသုံးပြုသောအခါအလုပ်အပိုင်းအစ၏ကျဉ်းမြောင်းမှုအချိုးအစားသည်လိုအပ်ချက်မရှိချေ။ စက်၏တပ်ဆင်မှုသည်အလျားလိုက်မဟုတ်ပါ စစ်ဆင်ရေးလက်စွဲအရခုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။
9 ခုံသည်အလိုအလျောက်အစာမကျက်နိုင်ပါ။ ၁။ ဘယ်နှင့်ညာချည်ပြောင်းလဲမှုလီဗာကိုမှန်ကန်စွာအသုံးမပြုပါ။
2. အဆိုပါလွှဲဂီယာပယ် com ။
1. လီဗာစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်ညာဘက်တွင်ရှိလျှင်၊ စက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစာကျွေးနိုင်သည်၊
2. လွှဲဘောင်ပေါ်ခွံမာသီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ ဒါကြောင့်လွှဲဂီယာကိုချွတ်လာ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချိန်ညှိကိရိယာများသည် swing frame ပေါ်ရှိ nut ကိုတင်းကျပ်သည်။
10 ခါးစညျးရှေ့ဖုံးမြင့်မားသောမြန်နှုန်းအတွက်မရွှေ့နိုင်ပါ ၁။ ဖျူးကိုမီးရှို့သည်။
၂။ မြန်မြန်ရွေ့လျားလက်ကိုင်ကိုဖွင့်ပြီးခလုတ်ကိုဆွဲထုတ်ပါ။ ကြေးနီနှင့်အဆက်အသွယ်အချက်နှစ်ချက်ကိုချိန်ညှိပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အချက်များကိုနှိပ်ပါ, button ကို refit ။
11 စက်လည်ပတ်သောအခါဆူညံသံမြင့်မားသည်။ ဝက်ဝံများဖျက်ဆီးခံရသည်။ ၁။ မော်တာစတင်ပြီးနောက်တွင်ရှိသော ၀ တ္ထု ၁ ကျွန်ုပ်၏ဆူညံသံသည်မြင့်မားပါက၊ ၀ င်ရိုးအပေါ်၌ရှိသောသက်ရောက်မှုသည်ဖျက်ဆီးခံရသည်။
၂။ ဗိုင်းလိပ်ကိုဖွင့်ရန်ထိန်းချုပ်သောလက်ကိုင်ကိုရုတ်သိမ်းသောအခါ၊ ဆူညံသံမှာမြင့်မားသည်။ ဤအချက်သည်ဗိုင်းလိပ်တံ၏သက်ရောက်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။
12 ခုံတပ်ဆင်သောအခါတစ်ခုခုသတိပြုရမည်။ ၁။ ဝါယာကြိုးများချိတ်ဆက်ပြီးနောက်မော်တာသည်တူညီသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလည်ပတ်သည်။ မည်သည့်မော်တာကိုမဆိုအလိုအလျောက်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။
၂။ ဆီလီကွန်စက္ကူကိုဖြိုဖျက်ပြီးစက် install လုပ်ပြီးလျှင်သေချာစွာဆေးကြောပါ။
၃။ ဆောင်းရာသီတွင် ၂၀ # နှင့်နွေရာသီတွင် ၃၀ # ပါသောစက်ဆီကိုသိုလှောင်ပါ။ it ၎င်းကိုကားသို့မဟုတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီအသုံးပြုသောချောဆီဖြင့်အစားထိုးခြင်းမပြုပါနှင့်။